यो साता यी ६ राशिको भाग्य चम्किलो, कुन हो तपाईको राशि ? – Online Nepal
यो साता यी ६ राशिको भाग्य चम्किलो, कुन हो तपाईको राशि ?
May 23, 2020 339
मेष- रचनात्मक काम गरेर पुरानो पद्धतिमा सुधार ल्याउन सकिनेछ । मनग्य आम्दानी हुने नोकरी प्राप्त हुन सक्छ । वृष- मुनाफा हात पर्ने व्यवसाय सुरु गर्न साझेदारीहरूबीच मत मिल्नेछ । मर्यादा पालन नगर्दा अफिसियल कार्यमा अवरोध सिर्जना हुन सक्छ । मिथुन- साता उत्साहप्रद तथा विभिन्न खाले मनोरञ्जनले बित्नेछ । धार्मिक भ्रमण गर्दा प्रेमिकाले नौलो धातु उपहार प्रदान गर्न सक्छिन् ।
कर्कट- मन मिल्ने साथीसँग यात्रा गर्दा नसोचेको फजुल खर्चले सताउनेछ । टाढा रहेका साथीको सुझाव अनुसरण गर्दा गतिलो अवसर हात लाग्नेछ । सिंह- यो साता पूर्वतर्फको यात्रा गर्ने अवसर जुर्नेछ । कार्य व्यस्तताका कारण घरपरिवारमा खटपट हुन सक्छ, जसलाई निर्मूल गर्न घरपरिवारमा समय खर्चिनुपर्ने हुन्छ । कन्या- मझौला व्यवसाय फस्टाउन नसक्दा थप लगानीले पिरोल्न सक्छ । मौसमी फेरबदलबाट आइलाग्ने अस्वस्थतामा समय खर्चिनुपर्ला ।
तुला- मेहनत, कर्मठ, लगनशीलताले प्रतिष्ठा दिलाउनेछ । मित्रहरूले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गर्नेछन्, धैर्य भई कार्य गरेमा कार्य सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ । वृश्चिक- सहपाठी मित्रहरूबीच कार्यगत एकता भै नयाँ कार्यको श्रीगणेश गरिनेछ । आकर्षक रोजगारी हात लाग्दा साथीभाइबीच चर्चित भइनेछ ।
धनु- आफ्ना कमजोरीबाट फाइदा उठाउनेहरू सल्वलाउन सक्छन्, उचित ध्यान दिनुहोला । साथीहरूले वचन फेर्दा चोट पुग्न सक्छ । मकर- आध्यात्मिक चिन्तनले समाजसेवातर्फ अभिप्रेरणा जगाउन सक्छ । पहिलेका कमजोरीहरू सच्याउँदै बिग्रिएको सम्बन्ध पुनः सुमधुर बनाउन सकिनेछ ।
कुम्भ- तपाईंको निर्णय क्षमताले विभिन्न अवसरको ढोका खोल्नेछ । प्रतिस्पर्धाबाट सफलाको इनाम प्राप्त हुनेछ । मीन- मित्र तथा नातेदारको बोलावटमा संलग्न हुँदा अधिक मनोरञ्जन भै शारीरिक थकानको महसुस हुनेछ।
Prevनेपाली सेनाद्वारा टिङ्कर र लिपुलेक पुग्ने सडक निर्माण सुरु
Nextएम्बुलेन्स चालकले एम्बुलेन्स चलाउन छाडेर जान थालेपछि आफैँ चलाएर गाउँबाट बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउँदै वडाध्यक्ष